Google - Beddel astaanta google maanta | Abuurista khadka tooska ah
Google - Waxaan beddelay astaanta google-ka maanta
Abuurista khadka tooska ah | | General
Maanta waa Halloween, google-ka ayaa had iyo jeer badala astaanta sanad walba, halkan waxaan idinku tusayaa astaanta maanta maxaad u maleyneysaa ...
Aniga oo ka faa'iideysanaya munaasabadda, waxaan wax uga dhajiyaa Halloween ...
(/ jalowín /) waa a shindig ka imanaya dhaqanka Celtic ee inta badan laga xuso gudaha Mareykanka habeenka maalinta 31 bisha Oktoobar. Carruurtu waxay u labbistaan ​​munaasabadda waxayna lugeeyaan waddooyinka iyagoo weydiinaya macmacaan guri ilaa guri. Ka dib garaacidda albaabka, carruurtu waxay ku dhawaaqaan weedha "Trick or treat" ama "Sweet or trick" (oo ka soo jeeda ereyga Ingiriisiga ah "trick or treat"). Haddii dadka waaweyn ay siiyaan nacnac, lacag ama nooc kale oo abaalmarin ah, waxaa loo fasiray inay aqbaleen heshiiska. Hadday, dhinaca kale, diidaan, wiilashu waxay ku ciyaari doonaan kaftan yar, tan ugu caansan waa inay ukunta ku tuuraan ukunta ama kareem xiirashada.
Ereyga Halloween waa soosaarida muujinta ingiriisi Dhamaan Hallow's Eve (Eve of Day of Saints '). Waxaa looga dabaal degay wadamada Anglo-Saxon, badanaa Kanada, Mareykanka, fekradeed iyo Reino UNIDO. Laakiin hadda waxaa looga dabaaldegaa ku dhowaad dhammaan waddammada reer galbeedka iyadoo joogitaankeedu ka weyn yahay ama ka yar yahay.
Asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay unugyada , oo xisbigii loo dhoofiyay Mareykanka muhaajiriinta reer Yurub ee Qarnigii XNUMXaad, ka badan ama ka yar qiyaastii 1846. Awoodda ballaadhan ee dhaqanka ee USA ayaa Halloween ka dhigtay mid caan ka ah dalal kale sidoo kale. Halloween waxaa loo tixgeliyaa fasax Mareykan ah waqtiyada casriga ah.
Taariikhda Halloween waxay dib u laabanaysaa in ka badan 2.500 sano ka hor, markii sanadkii Celtic-ku dhammaaday dhammaadka xagaaga, si hufan Oktoobar 31 ee kalandarkayaga. Lo ’ayaa laga soo qaaday seeraha waxaana la geeyay xeryaha xilliga jiilaalka. Maalintii ugu dambaysay, ruuxyadu waxay ahayd inay awoodaan inay ka baxaan qabuuraha oo ay la wareegaan meydadka kuwa nool si ay u soo nooleeyaan. Si taas looga fogaado, tuulooyinka Celtic-ga ayaa guryaha daadsan oo "lagu qurxiyay" lafaha, dhakadaha iyo waxyaabo kale oo aan fiicnayn, si ay dadkii dhintay u ag maraan cabsi. Sidaa awgeed dhaqanka ayaa ah qurxinta guryaha oo leh ujeedooyin xunxun oo ku saabsan xilligan xaadirka ah 'All Saints' Eve iyo sidoo kale dharka. Sidaas awgeed waa xaflad la xidhiidha imaatinka ilaahyada jaahilka ah ee nolosha.
Safarka caruurta ee raadinta macmacaanka waxaa laga yaabaa inuu la xiriiro dhaqan holland oo ka mid ah Iiddii Saint Martin.
1 Macnaha bocorka
2 Asalka Halloween
2.1 Ciidaha Celtic
Waxaa la sheegay in sixirroolayaashu ay isticmaaleen dhakada qolofyada dadka ee ay ku qurxiyaan shumacyo gudaha ku jira. Laakiin dhab ahaantii asalka bocorka waxay ahaayeen dabocase, kuwaas oo loo faaruqay si loogu soo bandhigo dhuxul gudihiisa, isla markaana u iftiimiya jidka dadka dhintay ee dhulka yimid habeenkaas.
Xaqiiqda ah in xisbigani uu badbaaday ilaa maanta waa, ilaa xad, iyada oo ay ugu wacan tahay soo bandhigida weyn ee ganacsiga iyo xayeysiinta laga sameeyay shineemooyinka ganacsiga Mareykanka. Sawirka carruurta Waqooyiga Ameerika ee dhex mushaaxaya waddooyinka mugdiga ah oo loo ekeysiiyay goblins, cirfiid iyo jinniyo waa muuqaal, weydiisanaya macmacaan iyo macmacaan dadka deggan xaafaddaas mugdiga iyo xasilloonida leh. Sawirka waddamadaas aad ugama fog xaqiiqda oo inbadan ama kayar ayaa xisbigu u socdaa sidan.
Celts waxay u dabaaldegeen afar xafladood oo waaweyn sanadka oo dhan:
Imbolc-ka (ama Imbolg): kii ugu horreeyay ee ciidahan waxaa loo dabbaaldegi jiray bilowgii Febraayo (Febraayo 1), markii ubaxyadii ugu horreeyay ay bilaabeen inay koraan, waxaana loo hibeeyay ilaahadda Imbolc ama Brigit, oo xoolaha nool ay u hibeeyeen sidii xilliga qaboobaha, gaar ahaan dheddigga, maxaa yeelay waxay ahayd xilligii la abuuri lahaa jiilaalka mustaqbalka.
Beltane: xafladii labaad ee loo dabaaldegay 1-da May (habeenka 1-da May waa habeen Walpurgis). Bandhigan waxaa loogu talagalay Belenos, ilaaha dabka. maalinta dabka waxaa loo daahiriyey xayawaanka iyo dadka oo dhan qiiqooda. Dabka ayaa laga shiday dusha sare ee buuraha (Celts-ka tani aad ayey muhiim ugu ahayd: midowgii ay ka dareemeen dabeecadda aad buu u xoog badnaa, xagga sarena waxaad ka arki kartaa dhammaan weynaanta hooyadeen Dunida), kuwanna waa la bakhtiiyey tan xigta maalin.
Lughnasa (ama Lugnasad ama Lamas): waxaa loo dabaaldegay bartamihii Juun waxaana loo hibeeyay Lug ee Ireland, Lugus Gaul iyo Lleu ee Scotland. In kasta oo ilaahaan lagu yaqaan magacyo kala duwan, haddana wuxuu ahaa ilaah nuurka. Dabbaaldeggan wuxuu ahaa kii ugu dabeecadda fiicnaa, oo loogu dabaaldegayo mahadnaq xagga taranka xoolaha iyo keyd badan oo raashin ah.
Gacanteeda: dabaaldeggii ugu dambeeyay uguna muhiimsanaa ee Celtic wuxuu dhacay 1-da Nofeembar. Maalintani waxaa loola jeedaa Maalinta Sannadka Cusub (oo ah habeenka ugu horreeya, Oktoobar 31, "Sannadka Cusub"), isla markaana waxay tilmaamaysaa in marxaladdu bilaabmayso: jiilaal.
Sanadka Celtic waxaa loo qaybiyaa laba xilli oo waaweyn: xilliga xagaaga, oo ka bilaabma Beltane (May 1) ilaa Samain (Nofeembar 1), iyo jiilaalka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Google - Waxaan beddelay astaanta google-ka maanta
looma baahna dijo
Ma jecli wax uun astaanta ama google fomdoi oo ah mu mome
Jawaab looma baahna
Burush - Xirmo burushyada xumbada